NDIRI murume ane makore 40 | Kwayedza
NDIRI murume ane makore 40
09 Jan, 2015 - 09:01	 2015-01-09T13:26:17+00:00 2015-01-09T09:00:20+00:00 0 Views
NDIRI murume ane makore 40 ndiri kutsvaga mukadzi ane makore 40-45 akasimba uyo anoti haasi kupfimbwa. Ngatumire sms pa0773 061 907.
Ndine makore 31, handina mwana uye ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 32 zvichidzika ane mwana kana asina. Nhamba dzangu idzi 0733 436 503.
Ndiri murume ane makore 30 ndinoda musikana wekuroora ane makore 18 – 25. Anofona pa0717 588 295.
Makadii henyu? Ndinotsvagawo murume asati aroora ane makore 19-30 ari positive anoshanda muHurumende ane mwana. Ini ndiri musikana ane makore 22 ndakazvarwa ndiri HIV+, handina mwana. Fonai kana sms pa0776 989 679, vanoda zvekutamba kwete.
Ini ndiri murume ane makore 39 nevana 2 uye ndinoshanda muHurumende. Ndinotsvaga mukadzi anoda kuroorwa akavimbika anoshanda kana anozviitira bhizimusi rekuti tiwanewo kurarama ane makore 28 kusvika 45. Kunyangwe asina mbereko kana ane vana vake, ndibatei pa0717 080 194.
Makadini veKwayedza? Ndakanguri ndanyora, ndiri mukomana ane makore 27 ekuberekwa ndiri kutsvakawo musikana ane makore 18 kusvika 25 asina mwana, ari pachokwadi. Ngaave wemuGweru kana muKwekwe uye anotya Mwari. Anoda ngaafone panhamba idzi 0714 571 544 asi macall back kwete ndapota hangu.
Ndiri murume ane makore 39 ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ari pachokwadi anoda zvemba. Anoda anondibata pa0775 592 337.
Ndine makore 30 uye ndiri kutsvagawo musikana ave kuda zvemba asingatarisire zvakawanda ane makore 24 zvichidzika. Ndiri mupositori, anoda ndibate pa0778 530 733.
Ndine makore 28 uye ndiri kutsvaga mukadzi anoda kuroorwa ane makore 18 – 25. Mukoti, mupurisa kana mudzidzisi ngaandibate pa0777 332 183.
Ndiri mukomana ane makore 25 ekuberekwa ndinotsvakawo musikana akanaka ane makore 18 -25. Anoda ndibate pa0733 324 077 asi call me back kwete.
Ndiri mukomana ane makore 32 ndinotsvakawo mudzimai ane makore 25 – 30 anoda zvemba. Ndiri HIV negative, nhamba dzangu 0735 656 158, ndinobatika paWhatsApp.
Ndiburitseiwo mubepanhau. Ndiri murume ane makore 28 nemwana 1, HIV negative uye ndinodawo musikana kana mukadzi ane mwana 1 ane makore 19 kusvika 23. Nhamba dzangu 0773 653 762.
Ndiri mukomana ane makore 27 ndinotsvagawo musikana ane makore 20 kusvika 25 kana mukadzi ane mwana mumwe zvinoita. Anoda anondifonera pa0775 280 945, ndinonzi Alfred.
Ndiri musikana ane makore 23 ndinotsvagawo mukomana anoda kuroora kana murume ane mwana 1, aine makore 32 zvichidzika. Nhare yangu 0739 569 511.
Ndinodawo musikana ane makore 25 zvichidzika, ini ndine 30. Ndinonzi Andrew, nhamba dzangu 0771 473 359 kana paWhatsApp tinotaura.
Ndiri mukomana ane makore 22 ndinoda musikana ane makore 18-20. Ndibatei pa0716 527 767.
Ndiri mukomana ane makore 26 ekuberekwa ndinotsvagawo musikana wekuroora ari pachokwadi. Vanoda ndibatei pa0734 047 496.
Ndiri mudzimai ane makore 38 ndinotsvagawo murume ane makore 45 kusvika 50 anoshanda sezvo ini ndinoshanda ndichigara muHarare saka ndodawo ari muHarare kuti kufambirana kusanetsa. Ngaave ane vana vakura zvekuenda kuchikoro vari vatatu. Ndinoda asina mudzimai, akafirwa kana kurambana anogeza pamwe nekufarira kukwesha mazino nekugera ndebvu. Ndibatei pa0783 810 951.
Ndiri murume ane makore 52 ndinoda mukadzi ane makore 30 zvichikwira chero ane vana 2 kana 1. Ada ngaandibate pa0775 339 649.
Ndiri mukadzi ane makore 31, HIV+ uye ndine mwana 1. Ndinoda murume ane makore 35 – 45 ari positive seni anoshandawo. Nhamba dzangu 0782 215 985.
Ndiri kutsvagawo musikana wekuroora, ndine makore 21. Vanoda ndibatei pa0779 803 777.
Ndiri musikana ane makore 28 asina utachiona ndinotsvakawo mukomana akavimbika ane makore asingadariki 33. Asinganwe doro uye anoshanda muHurumende ndibate pa0715 724 492.
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 27 ndiri kutsvagawo mukoma ari pachokwadi ava kuda zvemba ane makore 29- 34. Ari HIV negative uye anotya Mwari nhare dzangu 0783 193 394.
Ndiri murume ane makore 36 ndinotsvaga mudzimai ane makore 21 kusvika 30 asina utachiona hweHIV. Ini ndinoshanda pakambani saka iye ngaave munhu anosevenza ane mwana 1 kana 2. Anondida ngandibate pa0771 431 027.
Ndiri mukomana ane makore 28 ndinoda musikana ane makore 18 – 23 anonamata ari HIV negative. Ari pachokwadi nhamba dzangu 0716 282 728.
Ndiri murume ane makore 41 ndinotsvagawo shamwarisikana. Nhamba dzangu 0716 733 076.
Ndiri mujaya ane makore 23 ekuberekwa, ndichiri kuchikoro kuyunivhesiti uye ndinotsvaga musikana ane makore 20 zvichidzika ari positive seni kubva pakuzvarwa asingaratidziki. Nhamba dzangu 0734 867 754, ndatenda hangu.
Ndiri mukomana ane makore 27, ndiri kutsvagawo musikana anoda imba ane makore 18-24. Ndinotarisira kuwana anotya Mwari, akashambidzika uye anokwanisa kutaura Chirungu. Ndinozvishandira basa ramawoko, ndichigara muguta reHarare. Nhare dzangu idzo 0716 829 837.
Ndinodawo shamwarikadzi ine makore 25 zvichidzika anogara Gweru, Kwekwe kana Kadoma. Nhare dzangu 0775 386 724 chero paWhatsApp ndiripo.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndiri kutsvagawo musikana ave kuda zvekuroorwa asiri pamushonga ane mwana 1 kana asina. Nhamba dzangu 0717 191 041 kana kundibata paWhatsApp.
Ndiri murume ane makore 36 ndinoda mukadzi ari pachokwadi kwete zvekutamba ane makore kubva 20 kusvika 35. Ari pachokwadi ngaandibate pa0773 484 459.
Makadini veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 20 ekuberekwa ndiri kutsvagawo shamwari yechisikana ine makore 18-20 asingade upfumi chete. Ndibatei pa0779 818 284.
Ndiri murume ane makore 33, ndiri kutsvaga mudzimai wekuroora ane makore 20-30 ane mwana 1 kana 2 asina chirwere. Anoda ngandibate pa0776 074 835.
Ndinonzi Suzan, ndine makore 38 uye ndakambonyorera kuchirongwa chino asi handina kuwana wandaida. Ndiri HIV positive asi ndiri sidudla yakanyanya handionekeri kuti ndiri pamushonga. Ndine vana vatatu uye ndinogara kuBulawayo, ndinoda anondiroora kwete anotamba. Anenge andifarira anondibata pa0771 630 691.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 35 nemwana 1 uye ndiri kutsvagawo murume ari pachokwadi anoda kuroora ane makore 35 kusvika 42. Nhamba dzangu 0779 999 473.
Ndiri kutsvagawo mukadzi wekuwana werudzi rwechilslam. Anoda ngaafone kana kutumira sms pa0771 515 515.
Ndiri mukomana ane makore 22 ekuberekwa ndiri negative uye ndinoda musikana ane makore 18 -19 ari negative. Ndinoshanda kuZesa anoda nharembozha 0717 090 265.
Ndiri murume ane makore 30 ndinotsvaga mukadzi wekuroora ane rudo. Anondidawo zvake nhare dzangu 0776 744 652.
Makadini veKwayedza? Ndinotsvagawo shamwari yechirume ndiri mudzimai ane makore 30 nemwana. Murume uyu ngaave ane makore 40 asina mukadzi. Anondida nhamba dzangu 0783 596 464.
Ndiri mukadzi ane makore 23 ndinotsvaga murume anoshanda ari HIV negative. Ndine vana 2, ari pachokwadi ngaafone pa0776 568 658.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndiri kutsvagawo musikana ane makore 18-23 wekushamwaridzana naye. Nhare dzangu 0773 050 542.
Ndiri murume ane makore 38 ndinotsvakawo mukadzi akavimbika wekuroora. Ndine musha kuGokwe, anoda kuroorwa nhamba dzangu idzi 0713 264 763 kana paWhatsApp ndiripo.